Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana any Trinidad sy Tobago » Fizahan-tany Trinidad mamelombelona indray miaraka amin'ny New Man in Charge
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Hospitality Industry • Vaovao • People • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao Mafana any Trinidad sy Tobago
Tale jeneralin'ny fizahantany any Trinidad
Vao nanambara ny fanendrena ny Lehiben'ny mpanatanteraka vaovao ho an'ny fikambanana ny fizahantany Trinidad Limited (TTL). Kurtis Rudd dia voatendry ho lehilahy vaovao miadidy, nanomboka 2 andro lasa izay tamin'ny 20 septambra 2021.
Ity no iray amin'ireo vanim-potoana sarotra indrindra tamin'ny tantaram-pitetezana sy fizahan-tany tao Trinidad, ary mila fitarihana vaovao hampitambatra ny sehatra.
Miaraka amin'ny fitiavany mandritra ny androm-piainany amin'ny fananganana marika sy ny fitiavany tsy misy fifehezana ny firenena, Kurtis Rudd dia nitady mandrakariva ny hanompo ny tany nahaterahany.
Nilaza i Rudd fa mirehareha amin'ny fiampangana azy amin'ny andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny fananan'ny fizahantany eto amin'ny nosy.
Kurtis Rudd dia nitondra traikefa fitantanana zokiolona maherin'ny 25 taona miaraka amin'ny varotra, fifandraisana stratejika ary ny fahaiza-mitantana izay hanampy Fizahan-tany Trinidad satria mamelombelona ny toekarem-pizahantany eto amin'ny nosy. Ity dia iray amin'ireo vanim-potoana sarotra indrindra tamin'ny tantaram-pitetezana sy fizahan-tany tao Trinidad, ary ilaina ny fitarihana vaovao hampitambatra ny sehatra sy hamaritana lalana mazava ho an'ny famerenana amin'ny laoniny ny dia iraisam-pirenena.
Miaraka amin'ny fitiavany mandritra ny androm-piainany amin'ny fananganana marika sy ny fitiavany tsy misy fifehezana ny firenena, Kurtis Rudd dia nitady mandrakariva ny hanompo ny tany nahaterahany. Izy dia nitana andraikitra ambony amin'ny fitantanana zokiolona miaraka amin'ireo orinasam-pandraharahana mitarika eo an-toerana sy any Karaiba, ao anatin'izany ny Shell Caribbean, Prestige Holdings Limited, Courts Trinidad Limited, ary Guardian Life.
Rehefa nanaiky ny fanendrena azy i Kurtis Rudd dia nilaza hoe: “Faly aho miditra amin'ny isan-karazany sy manan-talenta Ekipa Trinidad momba ny fizahantany tompon'andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny fananana fizahan-tany tsy manam-paharoa sy tsy manam-paharoa eto amin'ny nosintsika manerana an'izao tontolo izao. Ao anatin'ny fotoan-tsarotra izahay amin'ny fampiroboroboana ny indostrian'ny fizahan-tany any Trinidad, ary mila ny fiaraha-miasa stratejika eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny daholobe mba hitrandrahana ny tsena mialoha ary hiala amin'ity areti-mandringana ity. Faly aho fa afaka manana fotoana hiarahana miasa amin'ny Board of Directors, tarihin'i Cliff Hamilton. Soa ihany izahay fa manana olona manana kalitao sy traikefa fizahan-tany manerantany hitarika ny fikambanana. ”
Namarana ny teniny Andriamatoa Rudd hoe: "Ity no tena nofinofiko ary antenaiko ny hiara-hiasa amin'ny minisiteran'ny fizahantany, ny kolontsaina ary ny zavakanto ary ireo mpiara-miasa rehetra amin'ny famolavolana sy ny fitantanana ny fandaharam-potoanan'ny sehatry ny fizahantany hahatratrarana maharitra sy fitomboana. . ”
Nahazo diplaoma tao amin'ny College Fatima, Kurtis Rudd dia nahazo Master of Business Administration (MBA), General Management avy amin'ny Henley Management College, UK, ary mpampianatra ambony ao amin'ny UWI-ROYTEC. Nanambady nandritra ny 25 taona i Kurtis Rudd.
September 23, 2021 ao amin'ny 09: 28
Tsy maintsy mampiseho kopia vita pirinty na elektronika amin'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka ianao mba hipetrahanao amin'ny sidinao. Ny fara tampony dia ny fitiavan'ny mpizahatany tantaram-pitiavana amin'ny mponina any amin'ny toerana maro any Karaiba.